Iingcebiso zengcebiso ukusuka kwi-Semalt On Indlela yokukhusela iWebhu ye-WordPress kwi-Criberals
Ukhuseleko lweWindowsPress lubizwa ngokuthi "lukhuni". Nokuba ungayazi indlela yokuphuculai-website yakho yendlela, kubalulekile ukuba ukhusele iziqinisekiso zewebhusayithi yakho. Akuyi kuphazamiseka ukuthetha ukuba izigidi kwiibhiliyoni zewebhsayithizixhaswe yiBlogger okanye iWindowsPress.
Nik Chaykovskiy, The Semalt Umphathi oPhezulu oPhumelela kwabaThengi, uthi i-WordPress yindlela eyaziwayo kakhulu kunye nabasebenzisi abanomsebenzisi. Le nkqubo yokulawula umxholo ininziizibonelelo kunye neentsilelo. Umzekelo, ukuba awugcini iiphasiwedi zakho zikhuselekile, unokulahlekelwa iziqinisekiso zakho kunye nokufikelela kwiwebhusayithi yakho - fabricas de puff.Nazi ezinye iingcebiso malunga nendlela yokukhusela iwebhusayithi yakho yeWindowsPress kwii-hackers.
Phindela kwiWebhusayithi yakho rhoqo
Ixesha eliqhelekileyo lwe-WordPress backups ngenye yezihloko ezixutyushwa kakhulu kule mihla.Kubalulekile ukuba indawo yakho ye-WordPress ixhaswe kakuhle. Kufuneka uyenze kanye okanye kabini ngesonto ukuhlala ukhuselekile kwi-intanethi.Ukugcinwa kwansuku zonke, kunjalo, kunconywa kakhulu njengoko ikhusela iwebhusayithi yakho kwiindawo ezinokuba zixhaphaze kunye nokuhlaselwa kwe-malware. KuninziIiplagizi ze-WordPress ezinokukunceda nge-back, kodwa i-BackupBuddy yenye yeyona nto ibhetele. Kuya kuhlawula imali engaphezu kwama-$ 100 kwaye inokubuyisela yakhoibhulogi okanye i-website inomxholo nje wemizuzwana. Lu lungile! Ukugcinwa kwe-Backup kuyinto iplagi efanelekileyo kulabo abafuna isofthiwe ye-WordPress yamahhala.Oku kukuvumela ukuba wenze isipele ngokuzenzekelayo, udlulisele iifayile kwiDropbox, kwaye ubuyisele idatha yakho ngexesha..Inketho yesithathu i-UpdraftPlus.I-plugin yesipelingi esisebenzisanayo kunye nomsebenzisi.
Umlinganiselo wokungena kwiimvavanyo
Ngexesha elide, abahlaseli bazama ukuphula iiwebhusayithi zeWindowsPress ngokuqiqaiiphasiwedi. Yingakho kufuneka unqande ukungena ngemvume kwi-intanethi. Ngokungagqibekanga, i-WordPress iya kukuvumela ukuba usebenzise amaphasiwedi ahlukeneyo,enenjongo yokugcina ulwazi lwakho lukhuselekile kwaye lukhuselekile. Kufuneka udibanise ukhuseleko olongezelelweyo kwiwebhusayithi yakho ngokunciphisa ukufikelela kwizinto ezimbiniamaxa amathathu. Xa kunjalo, umntu uzame ukungena ngemvume ngephasiwedi engafanelekanga, indawo yakho iya kuvalelwa, kodwa idatha yayo iya kuhlala ikhuselekile. KukhoIninzi enkulu yeeplagi ze-WordPress, ezinjengeMingeni yokuLungisa ukungena. Oku kukuvumela ukuba unciphise inani lokuzama ukungena ngemvume. Ukusebenzisa le plugin, wenainokukhusela ii-IP ezininzi, kodwa kubalulekile ukuba ukhumbule iphasiwedi yakho. Kwaye ukuba abahlaseli basebenzisa ama-proxies ahlukeneyo, le iplagin iyauzivimbele ngokuzenzekelayo bonke ukugcina iwebhusayithi yakho iphephile. Zonke iinketho zazo zizenzekelayo kwaye zisebenzise umsebenzisi. Unokubamba i-IP isikhashana okanyengokusisigxina.
Musa ukusebenzisa "admin" njengegama lakho lomsebenzisi
Enye yezona mpazamo ezinkulu abantu abazenzayo kukuba zisebenzisa "umlawuli" njengegama lomsebenzisi.Akufanele wenze njalo ukuba ufuna ukugcina iwebhusayithi yakho ye-WordPress iphephile kwaye ikhuselekile. I-bots ezenziwe ngokuzenzekelayo zihlala zifikelela kwiwebhusayithi zisebenzisa eli gama kwaye linakhoukuqagela amaphasiwedi ngexesha. Kukho amathuba abo abahlaseli beza kusebenzisa ulwazi lwakho olufihlakeleyo, idatha yewebhusayithi kunye nezinye izinto usebenzisa leigama lomsebenzisi. Ukuba ufuna ukugcina indawo yakho ikhuselekile, ngoko kubalulekile ukuba ungasebenzisi "admin" njengegama lakho lomsebenzisi oyintloko. Endaweni, kufunekaukhethe igama lomsebenzisi kunye nephasiwedi, engenakucingelwa ukuba ubani.